Hashflare zvakaitika - Tray News - Blockchain News
We kuedzwe Mugoveri Hashflare kwamuri. Tinobuda Kudzokorora uku yedu Hashflare nezviitiko. We ukadyara mari kwedu nhengo rubatsiro uye kukuratidzai migumisiro transparently. The Provider Hashflare hatina parizvino kuzivikanwa somumwe yakanakisisa kuchera rubatsiro panyaya ukoshi mari.
We Pari tine 1000.39 TH / That naBhaasha-256 Bitcoin Mining
Nokuda migumisiro yakanaka kwazvo ari mutengesi Hashflare, takapfeka zvizhinji vatenge okuwedzera. In muunganidzwa, isu paakapiwa pamusoro $ 150,000 mu kuchera pa Hashflare. In zvinotevera tsanangudzo unogona kuona basa redu parizvino wakawandirwa:
In zvinotevera zvakajeka tinoratidza iwe kuitika mugodhi zvabuda por TH / s:
Sezvaunogona kuona, isu parizvino kugamuchira approx. 0.00014428 BTC (Bitcoin) por wakawandirwa TH / s vasati deducting kwerunyararo mari. Ndizvo pamusoro 0.14 BTC (bitcoin) rimwe zuva panguva pasi 1000 TH / s. Pano unogona kuona mugumisiro shoma Nokuraramisa mari:
Pano zvakare pauwandu, kubva 0,14011852 Bitcoin vari kwatiri deducted yokuzvigadzirisa 0,02317,904. Mugumisiro Saka: 0.11693948 BTC pazuva. Shure kwezvose, 1288.87 USD pazuva ano Gengi – 11021.70 USD (26.01.2018)
Hashflare zvakaitika rutsigiro
Takava yakanaka kwazvo hashflare zvakaitika achitsigirwa saka kure. Zvaakazoita nguva mazuva maviri anofanira yakarongwa nemwi. nyonyova, zvisinei, tinoona kubudirana pachena pakati Mugoveri tichitarisa siyana anotsigira hova uye Facebook peji imwe inotarisirwa zvakanaka sezvo guru ndinoiitawo.
Kunyanya mukuru kubudirana pachena panyaya vanhu seri kambani. Kashoma gore Provider vanobata saka pachena naro. Nguva dzose zvakanaka kuziva ani uchitaura pane mumwe mugumo.
Hashflare zvakaitika backoffice kana Website
The Website ndiye kutsanya uye hofisi shure zvikuru nyanzvi. Kure kure, hapana gore Provider apo unogona kuitawo zviruva zvakawanda kudaro. Kana basa roushumiri rinoitwa pasi Website, Mupi achapa mashoko pamusoro Website uye on Facebook, wakanaka.
Experience nemigumisiro mugodhi
Ehe saizvozvo, Hashflare inokurudzirwa zvikuru sezvo mamiriro weNobel wedu Cloud Mining. Tiri kugutsikana chaizvo nemigumisiro. In pakudzokorora uku uye fananidzo unogona kuona migumisiro edu. Kana waifanira zvakanaka kana zvakaipa zvakaitika pamwe Provider ichi, inzwa wakasununguka nesu.
First-ruoko ruzivo nemishumo
In bvunzo Mishumo, tikavimba chete tega hashflare nazvo. Muchawana risiti nomumwe mashoko edu muchimiro screenshots website yedu. Hatina mari chaiyo iri dzazvinogara munhoroondo uye chete dzinoshuma zvabuda chaivo. A läpinäkyvä bvunzo nzira inokosha zvikuru kwatiri. mumwe chete nokutengesa kuti isu Vakaedzawo uye wakavaidza pachedu rinotaurwa uye dzinoongororwa nesu.
Experience pamwe payout pamusoro hashflare
Ehe saizvozvo, pakupedzisira, nyaya payouts chinonyanya kukosha. chete Provider nezvibereko chaiwo kubva nhamba muhofisi shure zvinowanisa yakanaka uye anonyatsozivikanwa Provider. Tinogona kusimbisa chokwadi ichi pamwe Hashflare pahwaro kwedu ruzivo. mukati 5 maminitsi Bitcoin wedu vakanga chikwama yedu. Uyewo panyaya iyi, tinogona chete kutokurudzira gore mugodhi Provider.
Ehe saizvozvo, kuwedzera edu ruzivo, isuwo vakaperekedza uwane uongororwe ne kutsvaga injini. Ehe saizvozvo, tikatsvaka paIndaneti nokuda Scam, kubiridzira, kana mashoko akafanana mutswe-kure. Kunyanya vaitaura Chirungu, apo gore kuchera atova nani kuvazivisa, pane zvakawanda ruzivo.
Mugumisiro wedu hashflare ongororo
Vari kutsvaka German uye dzakawanda uyewo YouTube, hatina kuwana chinhu kunaka nazvo pamwe Hashflare. On platforms zvose, Mupi anorumbidzwa zvakakura uye kunobatsira. Zvinoita sokuti Hashflare haana kuitwa vanokanganisawo guru makasitoma ayo. Ehe saizvozvo, hatina chete ukasavimba uchapupu izvi asiwo zvinobudirira kudzidzisa bvunzo dzedu mari.
munyori: Alexander Weipprecht
Sezvo yakadzidziswa IT nyanzvi kuti kushanda kukura, yave ichimuudza achitungamirira Software makambani anopfuura 10 makore. Cryptocurrency ari kuramba anokosha mabhizimisi uye vanoita. Alexander anoda kupa vanhu vose nyore kuwana basa.